ကျမချစ်သူ လူပျိုရိုင် – ျမန္မာသတင္းစံု
ကျမ အသက်က ၂၉ နှစ်ပါ ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ စာရင်းကိုင်လုပ်ရင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ခန်းလေး တစ်ခန်းငှားနေတယ်ဆိုပါတော့ ။ အရင်က ကျမယောကျာ်းလေးတွေအများကြီးနဲ့ဖြစ် ခဲ့ဖူးပေမယ့် လူပျိုစစ်စစ်လေးတစ်ယောက်နဲ့တော့ဖြစ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေတော်တော့်ကို ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ ကျမဆိုလိုတဲ့လူပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက မိန်းကလေးတွေနဲ့လုံး၀ တစ်ခါမှ မထိတွေ့ဖူးသေးတဲ့ လူပျိုစစ်စစ်မျိုးကိုဆိုလိုတာပါ ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် မနမ်းဖူးသေးတဲ့လူပျိုလေးမျိုးပေါ့။ တစ်နေ့ — ကျမအန်တီတို့အိမ်ကို အလည်သွား မိတဲ့နေ့တစ်နေ့ပေါ့ ။ ကျမရဲ့အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာမယ့်နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လာတော့မယ့်နေ့တစ်နေ့ဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။ အန်တီတို့အိမ်မှာ အရင် တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ရတယ်လေ ။ သူ့နာမည်ကထွန်းထွန်း တဲ့ အန်တီတို့နဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်ဆိုပါတော့ ။ အသက်က ၁၉ နှစ် ပဲရှိသေးပြီး အန်တီတို့အိမ်မှာနေပြီး ကျောင်းလာတက်တာ ။ အချိန်တိုင်း ကျမ သူနဲ့နီးစပ်ဖို့ အကြံထုတ်ရပါတော့တယ် ။ ၁၉နှစ်သာပြောတာရှင့် ။ ထွားလိုက်တဲ့ကိုယ်လုံး ။ မိန်းမတယောက်ကို ပျော့ခွေသွားအောင်လုပ်ပစ်နိုင်တဲ့အချိုးအစား ။ များသောအားဖြင့် သူတို့အရွယ်ယောကျာ်းလေးတော်တော်များများက ပျော့တိပျော့ဖတ်ကလေးတွေလေ ။ အလှပဲပြင်နေကြတာများတယ် ။
ထွန်းထွန်း ကျတော့ အားကစားလိုက်စားလို့ထင်ပါရဲ့ ။ လက်မောင်းအိုးတွေက လည်းထွားထွား ၊ ရင်အုပ်က ကျယ်ကျယ်နဲ့ ။ သူဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကတောင် သူ့ရဲ့တင်ပါးဆုံကြွက်သား အစိုင်အခဲတွေကို ဖုံးကွယ်မထားနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ ။ ရှေ့ပိုင်းကနေကြည့်ရင် သူ့ရဲ့ ထွားကြိုင်းလှတဲ့ အချောင်းကြီးကို အမြှောင်းလိုက်ကို မြင်ရတာ ။ အသားက လတ်လတ် ၊ ဆံပင်နက်နက် ၊ မျက်လုံးနက်နက်တွေနဲ့ ။ အို…ရင်ခုန်ချင်စရာပါပဲရှင်ရယ် ။ မရှက်တမ်း ဝန်ခံရရင်တော့ သူ့ကို စ တွေ့လိုက်ကတည်းက ကျမရဲ့ စိတ်တွေဟာ မရိုးမရွ ဖြစ်လာမိတော့တာ ။ ပီးတော့ကျမသာသူနဲ့ရွယ်တူဆိုရင် သူ့ကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်မိပါတယ် ။ တခါတရံ သူ့ရဲ့ဘောင်းဘီရှေ့က အထင်းသားပေါ်နေတဲ့ အမြှောင်းရာကြီးကို ကိုင်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကို မနဲကြီး ထိန်းထားနေရတော့တယ် ။ သူနဲ့လှေကားအတက်အဆင်းမှာ ၂ခါလောက်ဆုံဖြစ်တော့ သူ့ကို ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှအပတွေ မသိမသာလှစ်ဟ ပြလိုက်မိပါတယ် ။ ကျမရဲ့ ၃၄ လက်မ နီးနီးရှိတဲ့ရင်သားတွေကို ပိုပေါ်အောင်တီရှပ်ကို ကြပ်ကြပ်လေးဝတ်ပြီး အသားကပ်ဘောင်းဘီတင်းတင်းလေး ကို ဝတ်ပြီး သူ့ကို သိသိသာသာကြီးမြူဆွယ်သလိုလုပ်မိရော ။ ထမင်းစားပွဲမှာ အန်တီတို့နဲ့တူတူထိုင်ဖြစ်ကြတော့ သူ့ကို ကျမရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပြီးအကူ အညီလိုရင် ဆက်ဖို့ပေးလိုက်မိပါတယ် ။
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ဘာအကူအညီလိုလို တောင်းဖို့လည်း ပြောရတာပေါ့ ။ ဟန်ပြအနေနဲ့ ကျမကလည်း သူ့မိဘ တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြန်ယူထားလိုက်တာပေါ့ ။ သူရောက်ပြီး တစ်လလောက်အကြာမှာ ကျမအခန်းမှာ နေ့လည်စာ လာစား ဆိုပြီး ထွန်းထွန်းကို လာမယ့်တနင်္ဂနွေ အိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုလာရင်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သေချာပြောပြလိုက်တယ် ။ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၁၁နာရီခွဲလောက်မှာ ကိုယ်တော်ချောက ကျမအခန်းကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်ချလာပါလေရော ။ ကျမက အခန်းသန့် ရှင်းရေးလုပ်နေတုန်းပဲရှိသေးတာ ။ အခန်းဖော်သူငယ်ချင်းကလည်း မနက် ၈နာရီလောက်ကတည်းက ထွက်သွားလိုက်တာ ခုထိပြန်မရောက်သေးဘူး ။ ကျမလည်း အိမ်နေရင်းဆိုတော့ ညဝတ်အကျီ ၤလေးပဲဝတ်ထားမိတယ်ရှင့် ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး အောက်ခံလည်း ဘာမှ ဝတ်မထားမိဘူးလေ ။ အကျီ ၤက ပါးတယ်ဆိုပေမယ့် ကျမရဲ့ နို့တွေ ကိုအတိုင်းသားမြင်ရပေ မယ့်လည်း အောက်ပိုင်းက အမွှေးစုစုလေးကိုတော့ ကြည့်တတ်တဲ့မျက်စိမျိုးနဲ့မှ မြင်ရလောက်မှာပါ ။ ကျမလည်း ထွန်းထွန်းကို ဆိုဖာပေါ်မှာ အဆင်ပြေသလိုသာကြည့်ထိုင်ဖို့ပြောရင်းနေရာပေးလိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီနောက် “ ထွန်းထွန်းရေ .. ရေခဲသေတ္တာထဲမှာရေသန့်ဗူးရှိတယ် ။ ဂျု သောက်မလားဟင် ။ သောက်မယ်ဆို မမ အတွက်ကော ၂ခွက်စာဖျော်ပေးပါလား ၊မမ လက်မအားလို့ “ “ ဟုတ်ကဲ့ မမ ” ထွန်းထွန်းဖျော်လာတဲ့ ဂျု ခွက် ကိုလှမ်းယူရင်း သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ။ ရောက်တတ်ရာရာ စကားတွေပြောနေတုန်း သူ ခန ခန ကျမရဲ့ နို့တွေကို ခိုးခိုးကြည့်နေတာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ် ။ ၁၅ မိနစ်လောက် စကားပြောကြပြီး ထွန်းထွန်း ကိုဒီနေ့လည်စာ ဘာဟင်းနဲ့စားချင်လဲဟင်လို့မေးလိုက်တော့ ဟင့်အင်း ရတယ်မမ ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စားတတ်ပါတယ်လို့ ညင်သာစွာ သူကပြန်ဖြေတယ် ။ ကျမလည်း သူ့ကို သက်သာသလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဖို့ပြောရင်း မီးဖိုချောင်ထဲကို နေ့လည်စာ ချက်ဖို့ဝင်လိုက်ပါတယ် ။ “ ထွန်းထွန်း..မမကို လုပ်ကူပါလား ” လို့ကျမ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့ သူလည်း မီးဖိုချောင်က ချက်ပြုတ်နေတဲ့ကျမနား ရောက်လာပါရော ။ စကားတွေ ဟိုပြောဒီပြော ပြောကြရင်း သူ့မှာ ရည်းစားရှိမရှိ အစ်ကြည့်တော့ တစ်ခါမှ ရည်းစားမထားဖူးဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရပါတော့တယ် ။ ကျမကလည်း ပြန်ပီးယောကျာ်းလေးတွေက ဒီလိုပဲ ညာပြောတတ်ကြတာပဲ လို့ပြောတဲ့အခါ သူက “ မညာပါဘူးမမရယ်..ကျွန်တော် စိတ်ကိုမဝင်စားလို့ပါ ” တဲ့ ။ ကျမလည်း စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြီး ပျော်မိတာပေါ့ ။ “ မမ က ဒီမှာ တစ်ယောက်ထဲနေတာလားဟင် ” “ မဟုတ်ဘူး မောင်လေးရဲ့ မမသူငယ်ချင်း စမ်းဒေး နဲ့နေတာ ၊ သူက သူ့ရုံးမှာဒီနေ့အချိန်ပိုရှိလို့ဆိုပီး မနက်စောစောကတည်းကထွက်သွားလို့မင်းမတွေ့လိုက်တာ ” ဒီလိုပြောနေရင်း ကျမလည်း သူ့ကို ကျောပေးလျက်အနေအထားကနေ သူ့ဘောင်းဘီရဲ့ ဂွကြားထဲကိုမသိမသာ ခိုးကြည့်မိတယ် ။ ပီးတော့ကျမ ရဲ့တင်သားတွေကို တမင်လှုပ်ရင်း သူ့ရှေ့ကနေ ထွက်လာမိပါတယ် ။
ဗိုက်ဆာနေပြီလား မေးတော့ ရပါတယ်မမ တဲ့ ။ ကျမလည်း “တီဗီကြည့်ချင်ကြည်လေမောင်လေး မမ အိပ်ခန်းထဲမှာ တီဗီက ၊ကိုယ့်အိမ်မှာနေသလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာနေ ၊ စာအုပ်ဖတ်ချင်လည်းယူဖတ် ” လို့ပြောရင်း သူ့ကို ကျမအိပ်ခန်းထဲက တီဗီဖွင့်ပေးပြီး ချက်ပြုတ်နေတာလက်စသတ်ဖို့မီးဖိုချောင်ဖက်ပြန်ဝင်လိုက်တယ် ။ ကျမ ချက်ပြုတ်ပြီးလို့ အိပ်ခန်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ စင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းနဲ့ကိုယ်တောချောက ငြိမ်နေလိုက်တာ။ ကျမလည်း သူ့ဘောင်းဘီခွကြားကို မသိမသာအကဲခတ်ကြည့်တော့ ဖောင်းနေပီလေ ။ ကျမကို ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရင်ပဲ စာအုပ်ကို ဖွက်လိုက်ပြီး ရှက်သွားတဲ့မျက်နှာလေး နဲ့ကျမကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ် ။ တော်သေးလို့ပေါ့ မနေ့ညက စင်ဒီ နဲ့ကျမ ဟိုကားတစ်ကားကြည့်ထားတာ စက် ထဲက မထုတ်ရသေးတာ သူ ဖွင့်မကြည့်မိပေလို့ပဲ ။ ကျမလည်း ထွန်းထွန်းကို “ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ၊ မဂ္ဂဇင်း ဖတ်လို့မကောင်းလို့လား ” လို့ ဒဲ့ပဲမေးချလိုက်ပါတယ် ။ သူကလည်း “ ဒီလိုစာအုပ်တွေ အဆောင်မှာနေတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာ အများကြီးပဲ ” လို့ပြန်ဖြေတယ်လေ ။ “ မိန်းကလေးနဲ့ရော အဲဒီစာအုပ်ထဲကလိုတွေလုပ်ဖူးလား ” လို့ကျမက မေးတော့ “ဟင့်အင်း မမ ”တဲ့ ။ ကျမလည်း သူ့ကို စ ချင်တာနဲ့ အဲဒီပုံထဲကလို ကောင်မလေးတစ်ယောက် အခု မမရဲ့အိပ်ယာပေါ်မှာတွေ့ရင် ထွန်းထွန်းဘာလုပ်မလဲ လို့မေးလိုက်တော့မျက်နှာတွေရဲတက်လာလိုက်တာ ။ နောက်ဆုံး ကျမလည်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့ “ အပြင်မှာ အဲဒီထဲကလို ကိုယ်လုံးတီးနဲ့မမြင်ဖူးချင်ဘူးလား ” လို့မေးလဲမေး ၊ တပြိုင်တည်း ကျမရဲ့ ညဝတ်အကျီ ၤကို သူ့ရှေ့မှာ ချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ။ ထွန်းထွန်းလည်း မင်သက်မိနေပြီး ကျမရဲ့ထောင်စပြုနေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ် ။
ထွန်းထွန်း တံတွေမျိုချလိုက်သံကို အတိုင်းသားကြားလိုက်ရပါတယ်ရှင် ။ ကျမလည်း ကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လား .. မမ လှလားဟင် ဆိုပီး မေးလိုက်မိတယ် ။ ထွန်းထွန်းက ခေါင်းကြီးကို အတင်းငုံ့ထားပီး ခုထိ ရှက်နေသလိုပါပဲ ။ သူ ပြန်မဖြေခင်မှာပဲ ကျမ ရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မြွှာ ကို သူ့ရှေ့မှာပိုမြင်သာအောင် ခါးလေးရှေ့နဲနဲ ပိုညွှတ်လိုက်ပါတယ် ။ ကျမရဲ့စိတ်တွေ ထကြွလို့နေပါပြီ ။ အတွေးထဲမှာတော့ ထွန်းထွန်းဝတ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဘယ်လိုချွတ်ရမလဲဆိုတာပဲ စဉ်းစားနေမိပါတယ် ။ တစ်ခါမှ မိန်းမ မလိုးဖူးသေးတဲ့ လူပျိုရိုင်းလေး ရင်တွေ အတိုင်းသား ခုန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ကျမရဲ့ ရမ္မက်စိတ်တွေ ပိုပိုပီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင် ။ ကျမ သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပီး ကျမရဲ့ နူးညံ့လှတဲ့နို့တစ်ဖက်အပေါ်ကို တင်ပေးရင်း သူ့လက်ကို ကျမရဲ့လက် နဲ့ဖိပေးလိုက်ပါတယ်။ သူရဲ့လက်တွေဟာ ကျမရဲ့နို့ကိုထိမိတယ်ဆိုရင်ပဲ ဓာတ်လိုက်သလို တွန့်ကနဲဖြစ်သွားပီး ချက်ချင်းပြန်ရုပ်သွားပါတယ်ရှင် ။ “ ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟင် ၊ မကိုင်ရဲလို့လား ” လို့မေးလိုက်တော့ “ အကြီးကြီးတွေပဲနော် မမ ” တဲ့ ။ “ သေချာကိုင်ကြည့်စမ်းပါကွာ… ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးရလဲပြော ” ဆိုပီး ကျမ တဏှာသံလေးစွက်ပီး သူ့ကိုပြော လိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ။ ကျမရဲ့ နို့တွေကို ရှေ့တိုးပေးပြီး “ မမကို နို့စို့ပေးပါလားမောင်လေးရာ..နော် ” ဆိုပီး ပြောပြောဆိုဆို သူ့ထိုင်နေတဲ့ ကုတင်ဘေး လွတ်နေတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ် ။
ထွန်းထွန်းရဲ့လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ပီး ခေါင်းကို ကျမရဲ့ နို့တွေနားရောက်တဲ့အထိဆွဲယူလိုက် အတင်း စို့ခိုင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ကျမရဲ့နို့တစ်လုံးကို ဖြေးဖြေးနဲ့ညင်ညင်သာသာ စပီး စို့ပါတော့တယ်ရှင် ။ တပြိုင်တည်းမှာပဲတခြားနို့တစ်ဖက်ပေါ်ကို သူ့ရဲ့လက်တွေ ဆွဲယူတင်ပေးလိုက်ပြီး ဆုပ်နယ်ဖို့ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ထွန်းထွန်း နို့စို့တတ်လာပါပြီရှင်.. ကျမရဲ့နို့သီးခေါင်း လေးတွေကို တစ်ဖက်ပီးတစ်ဖက်ပြောင်းပြီး စို့ပေးနေပါတော့တယ် ။ အရမ်းခံလို့ကောင်းတာပါပဲရှင် ။ “ စို့…စို့..မောင်လေး..ဟုတ်ပီ..အဲဒီလို စို့ပေး…အရမ်းခံလို့ကောင်းတယ်မောင်လေးရာ…အင်းဟင်းဟင်း ” ကျမ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ လူပျိုရိုင်းလေး လိုးတာ ခံရတော့မှာ မို့လို့ရင်တွေ အခုန်မြန်လိုက်တာ ။ သူ နို့တွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်စို့ပေးနေတဲ့အခိုက် ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ကလေးကလည်း အရေလေးတွေ စိမ့်ကျနေပါပြီ ။ ထွန်းထွန်းကတော့ ကျမ ရဲ့နို့တွေကို ကစားလိုက် ညှစ်လိုက်စုပ်လိုက်နဲ့ မအားရအောင်ပါပဲ ။
ကျမ ကတော့ ထွန်းထွန်း ဘယ်လို လုပ်လုပ် ကြောက်စိတ် တစိုးတစိ မှဖြစ်မလာပဲ အရမ်းကို ကောင်းနေတော့တာပဲရှင် ။ “ ထွန်းထွန်း.. မမ မောင်လေးလိုးတာခံချင်တယ်မောင်လေးရယ် … လာ.. မမ ကိုလိုးပေး…မမ ပြမယ်ဘယ်လိုလိုးရ သလဲဆိုတာ .. ” “ မမ ရယ်…မမ အရမ်းလှတာပဲ …အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမမရယ် ” “ မောင်လေးရယ်..မမ နို့တွေကို ကလိတာ အားမရသေးဘူးလား လို့ …လိုးရအောင်လေ ..နော် ၊ မမ ကိုအားမနာနဲ့..လိုး နေတုန်း မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ ပက်ပက်စက်စက်စကားလုံးတွေ ပြောချင်သလိုပြောနော်.. အဲဒီလိုပက်ပက်စက်စက်တွေပြောမှ လိုးတာ ပိုအရသာရှိတာမောင်လေးရဲ့” “ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မထင်မိခဲ့ဘူး .. အသက်ကြီးတဲ့ မမ အရွယ်က ဒီလောက် ရွ ထ ပီး အရမ်းခံချင်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာ ” အခု ကျမ ထွန်းထွန်းရဲ့ ဘောင်းဘီထဲက ရုန်းနေတဲ့ လီးကြီး ကို အနီးကပ်ခံစားလို့ရနေပါပြီ ။ “ မောင်လေးရယ်..မင်းရဲ့ဘောင်းဘီထဲက အချောင်းကြီးက မမ အဖုတ်လေးကို လိုးချင်တယ်လို့ပြောနေသလိုပါပဲ..ဖောင်းပီးရုန်းနေပါလားဟင်” “ လာ မောင်လေး..မမ မင်းဘောင်းဘီကိုချွတ်ပေးမယ်..မင်းလည်း လိုးချင်နေတာမဟုတ်လား ” ကျမ ပြောရင်းနဲ့သူ့ကိုယ် ပေါ်က အဝတ်တွေကိုတစ်ခုချင်း အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ချွတ်ပေးနေပါပြီ ။ နောက်ဆုံး ပေါ်ထွက်လာတာကတော့ သန်မာလိုက်တဲ့ ၇ လက်မ အရွယ် လီးတန်ကြီးပဲပေါ့ ။ နောက် ကျမ သူ့ကိုယ်ကို ရှေ့ကို ဆွဲလိုက်ပီး သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်တွေကို လက်ဖဝါးလေးနဲ့ဖွဖွလေးပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
သူ့ရဲ့နို့သီး ခေါင်းလေးတွေကိုသွားနဲ့မနာအောင် ကိုက်ပီး စို့ယူပေးရင်း တဖြေးဖြေးနဲ့သူ့ရဲ့အောက်ဖက်ဆီကို လျှာဖျားလေးနဲ တို့လိုက် နမ်းလိုက် စုပ်လိုက်နဲ့ဆက်ဆင်းလာလိုက်တယ် ။ သူ့ရဲ့လီးတန်ကြီးနားမရောက်တရောက်လောက်မှ ကျမ အပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို မွတ်သိပ်စွာနဲ့စုပ်နမ်းလိုက်တော့တယ်။ သူ့ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ပါးစပ်ထဲကို ကျမရဲ့လျှာဝင်သလောက်ထိုးထည့်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို တင်းတင်းဖိစုပ်ပစ်လိုက်တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူ့ရဲ့လက်တွေဟာ ကျမတစ်ကိုယ်လုံး နေရာအနှံ့ပွတ်သပ်နေပါတောတယ်ရှင် ။ ကျမ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းနေရာကနေလွှတ်လိုက်ပြီး သူ့နားနားကပ်ကာလေသံလေးနဲ့ “ မောင့် လီးကြီး ကို မမ စုပ်ချင်တယ်မောင်… မောင် ဘယ်လောက်ထိကောင်းသလဲ ခံစားကြည့်နော် ၊ မောင့်ရဲ့လီး မာမာကြီးကို မမ ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးမလို့ သိလား ” “ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ ဒီလိုမျိုး လုပ်တာ မကြုံဖူးသေးဘူးမမ ၊ အရမ်းကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်၊စုပ်ပေးလေ မမ ” လို့တောင်းဆိုလာတော့ကျမလည်း သူ့ရဲ့လီးတန်ချောင်းကြီးရဲ့ထိပ်ဖျားက နီရဲပြောင်တင်းနေတဲ့ ဒစ်ထိပ်ကြီးကို လျှာအပြား နဲ့ဆွဲလိပ်ယူလိုက်ပြီး ပါးစပ်ထဲကို ဆွဲသွင်းလိုက်ကာသူ့ရဲ့လီးချောင်းကြီးကို အပေါ်အောက် စုပ်ပေးရင်း သူ့ဂွေးအုလေး ၂လုံးကိုလည်း ဖွဖွပွတ်ရင်း မနာအောင်ညှစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ .. “ အိုး….အားလားလား …မမ … မမ… ” ဆိုပီး အော်သံလေးတွေထွက်လာပါတော့တယ်ရှင် ။
ကျမလည်းသူ့လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲ ဝင်နိုင်သလောက်ဝင်အောင် သူ့တင်ပါးတွေကို လက်နဲ့ဆွဲဆွဲပီးစုပ်လိုက်တော့ ထွန်းထွန်း ရဲ့အော်ညည်းသံတွေကျယ်သထက်ကျယ်လာပါလေရောရှင် ။ အိပ်ယာထက်ဆီမှာ ကျမနဲ့၂ပါးသွားဖို့ချီတုံချတုံဖြစ်လာတာကတော့ သူကောင်းနေပုံကိုကြည့်ပြီး သံသယရှိစရာကို မလိုတော့တာရှင့် ။ ပူနွေးမာကျောလှတဲ့သူ့လီးကြီးကို အဆုံးရောက်ခါနီးအထိဝင်အောင် စုပ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ “ အိုး..မမ…အားလားလား ..ကောင်းလိုက်တာ မမရာ ” ဆိုပီး ကျမ သူ့လီးကိုအရင်းရောက်တဲ့ ထိစုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတိုင်း အော်နေတော့တာပါပဲ ။ “ မမ ပါးစပ်က အရမ်းကောင်းတာပဲ မမရယ် ” ကျမလည်း သူ့လီးကြီးကို စုပ်လိုက် ၊ ယက်လိုက် ၊ လျှာလေးထုတ်ပီး တဖတ်ဖတ်ရိုက်ပေးလိုက် မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကလိပေးနေရင်းက သူ့လီးကြီးကို လည်ချောင်းထဲအထိရောက်အောင် စုပ်ပေးလိုက်အုံးမယ် လို့စဉ်းစားရင်း အသက်ကို တဝရှုသွင်းလိုက်ပြီး လျှာကိုလီးတန်ကြီးအောက်ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ အရင်းထိရောက်အောင် လီးကြီးကိုမျိုချလိုက်ပါတယ် ။ သူ့ဂွေးအုက အမွေးကောက်ကောက်တွေ ကျမနှာခေါင်းဝကိုလာတိုးပီး အရင်းထိဖိကပ်မိတဲ့အထိမျိုချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ထွန်းထွန်းဟာ တကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ယင်လာပီး သူ့တင်ပါးတွေကို ရှေ့ကိုကော့ကော့ထိုးကာ ကျမပါးစပ်ထဲ ကို လီးကြီး ဝင်သထက်ဝင်အောင် ထိုးထည့်ပါတော့တယ်ရှင် ။ ကျမလည်း သူ့လီးကြီးကို ဒစ်ဖျားရောက်တဲ့အထိ ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် ၊ အရင်းရောက်တဲ့အထိ ပြန်စုပ်ချလိုက် လုပ်ပေးလိုက်တာ သိပ်မကြာခင်မှာ သူ့လီးထဲက သုက်ရည်တွေ ထွက်လာတော့မှာမို့သူ့ ရဲ့တောင်ပီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့လီးတန်ကြီးကို ပါးစပ်ထဲက ဆွဲချွတ်လိုက်ပီး နို့၂လုံးကြားထဲထည့်ပေးကာ နို့ကိုဘယ်လို လိုးရတယ်ဆိုတာ သိအောင် ပြလိုက်ပါတယ်ရှင် ။
ကျမရဲ့နူးညံတဲ့တောင်ပူစာက အသားဆိုင်တွေကြားထဲမှာ တိုးရင်းပွတ်ရင်း သူ့လီးတန်ကြီးဟာ အရေတွေ ထုတ်ချင်လို့ရှေ့ပြေး အရေကြည်လေးတွေ စို့ထွက်လာနေပါပြီ ။ ကျမလည်း ငုံ့ပြီး နို့ကြားထဲကို လိုးနေတဲ့လီးကြီးရဲ့ထိပ်ကိုလျှာဖျားလေးနဲ့လှမ်းလှမ်း ထိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့…“ အိုး…အိုး…မမ…ရှီစ်း…” လို့ညည်းရင်း နို့ကြားထဲကို ကော့ကော့ပီးလိုးနေလိုက်တာ ။ ကျမလည်း သူ့လီးကြီးကို နို့ကြား ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး သူ့ကို ပက်လက်နေဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာနဲ့ နမ်းရင်း တဖြေးဖြေး အောက်ဖက်ဆီကို ဆင်းလာလိုက်ပါတယ်ရှင် ။ သူ့လီးကြီးဆီကိုလည်းရောက်ရော ပါးစပ်နဲ့လီးထိပ်ကိုလှမ်းဟပ်လိုက်ပီး လည်ချောင်းထဲအထိ တစ်ဆုံးစုပ်ယူမျိုချလိုက်တဲ့အခါ “ အား…အား…မမ…မမရေ…အားအား ” နဲ့ တစ်ဆုံးစုပ်လိုက်တိုင်း အော်နေပါတော့တယ်ရှင် ။ “ ကျွန်တော် ဒီလိုမျိုးကောင်းလိမ့်မယ်လို့တစ်ခါမှ အရင်က မထင်ခဲ့ဖူးဘူးမမရယ်..ကောင်းလိုက်တာဗျာ ..အိုး..အရမ်းကောင်းတာပဲ..အရမ်းပဲဗျာ” ကျမလည်း ထွန်းထွန်းရဲ့လီးကြီးကို စုပ်နေတဲ့အရှိန် တဖြေးဖြေးမြှင့်ပီးစုပ်ပေးလိုက်တော့ “ အား…အား..မမရေ..မမ..အရမ်းကောင်းလာပီဗျာ…ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ဘူး..ဟူးဟူး…. အမလေး..အားလားလား…စုပ်ပါ..စုပ်ပါမမ ..မြန်မြန်လေး စုပ်ပေးပါ …” ဆိုပီး အောက်ကနေ လူးလွန့်အော်ဟစ်နေလိုက်တာ ရှင် ။ ကျမ လီးတန်ကြီးကို မြန်မြန် စုပ်ပေးနေရင်းက သူ ပြီးတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ် ။
ကျမမရပ်မနားကြိုးစားပမ်းစား စုပ်ပေးနေတုန်းမှာပဲ.. “ အား..အာ့…မမ…မမ…ဖယ်..ဖယ်ပါအုံး..ကျွန်တော် ထွက်တော့မယ်မမ…အား…မရတော့ဘူး..အောင့်ထားလို့မရ တော့ဘူး.မမ ပါးစပ် ဖယ်..ပေးအုံး …ထွက်တော့မယ်..ထွက်တော့မယ်…အား..အ..“ လို့အရမ်းအော်ပြီး ပေါင်တွေတဆတ်ဆတ်တုန်တက်လာပါတယ် ။ ကျမလည်း သူအော်လေ ပိုပြီးခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်ပေးချင်လာလေ နဲ့စုပ်ရင်းစုပ်ရင်း သူ့လီး ကြီးကို ရုတ်တရက် ပါးစပ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်သွားပြီး ကျမ ကိုယ်ပေါ်ကို သူ့သုက်ရည်တွေ စစ်ကနဲစစ်ကနဲပန်းပန်းထုတ်ပါတော့တယ် ရှင် ။ အရေတွေက များပြီး ပျစ်နေတာပဲ ။ အဲဒီလိုပန်းထွက်သွားတဲ့နောက်တော့ အိပ်ယာပေါ်ပစ်လှဲရင်း မောဟိုက်နေတဲ့အသံနဲ့ “ မမ …အရမ်းကောင်းတာပဲ မမရာ .. ဆောရီးနော်..ကျွန်တော် ခနလေးနဲ့ထွက်သွားတာ..မမ က အရမ်းကြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတော့ ကျွန်တော် စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်သွားလို့ ” ဆိုပြီး တောင်းပန်နေလိုက်သေးတယ် ကိုယ်တော်ချောက ။ ဘယ်လောက်ရီစရာကောင်းသလဲလို့။ ကျမ ဒီလို မှုတ်ပေးလိုက်လို့ကတော့ ဘဲတွေတော်တော်များများ မခံနိုင်လောက်ဖူးလို့ကျမ ထင်ခဲ့မိတယ်လေ ။ ခု လက်တွေ့ကျကျ ဒီကောင်လေးကိုမှုတ်ကြည့်လိုက်တာ အရေတွေအများကြီးထွက်လာတာတွေ့ရတော့ ကျမလီးစုပ်တာ တော်တော်လေး သူ့အဖို့စိတ် လှုပ်ရှားစရာပါလားဆိုတာသိလိုက်ရပါတော့တယ် ။
၂ယောက်စလုံး ခန အနားယူကြပြီးတော့ စနိုးတာ၀ နဲ့ သူ့ရဲ့လီးကိုရော ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုပါ သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျမ ကို သူ မှုတ်ပေးရမယ့်အလှည့် ။ “ မမ စောက်ဖုတ်လေးကိုလည်း ယက်ပေးပါလားဟင် ” “ မမ အဖုတ်ကို အရင်ဘယ်သူတွေယက်ပေးဖူးလဲဟင်မမ ” ဆိုပြီး ပြန်မေးခွန်းထုတ်နေသေးတယ် ။ ကျမ လည်း ပက်လက် လှဲချလိုက်ပြီး ခြေထောက်တွေကို ကားထားပေးလိုက်ပါတယ် ။ “ မမ ..ကျနော် ယက်တာကောင်းမကောင်း ကြည့်နော် ” “ အင်းပါ မောင်လေးရယ်…မမစောက်ပတ်လေးကို ဘယ်လောက်ထိကောင်းအောင် ယက်ပေးမယ်ဆိုတာပြပါတော့ကလေးရယ်…” ပြောပြောဆိုဆို ကျမက ထွန်းထွန်းရဲ့ခေါင်းကို ပေါင်ကြားထဲဆွဲဖိပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ။ ထွန်းထွန်းရဲ့လျှာဖျားလေးဟာ ကျမ စောက်ပတ်ဘေးဖက်နှုတ်ခမ်းသားတွေအပေါ်မှာ စပီးစုန်ချည်ဆန်ချည်လှုပ်ရှားနေပါတယ် ။ ကျမ စောက်ခေါင်းထဲမှာတွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ ဖြစ်လာရပါတယ် ။ “ အဆင်ပြေရဲ့လား ဟင် မမ ” ထွန်းထွန်းကလည်း ကတုန်ကယင်နဲ့မေးလာပါတယ် ။ “ အို…အို….ထွန်းထွန်း….အရမ်းကောင်းတာပဲကွယ်..မရပ်နဲ့..မရပ်နဲ့နော်…ယက်ပေး…ယက်ပေးပါ…ဟင့်ဟင့်အင့်” သူကလည်း ကျမ စောက်ပတ်ရဲ့အပြင်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုမရပ်တမ်း ယက်ပေးနေတော့တာပါ ။ တစ်ခါ တစ်ခါမှာ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို ချော်ချော်ပီးယက်မိသေးတာပေါ့ ။
“ အိုး….ထွန်းထွန်း…အချစ်လေးရယ်…မရပ်နဲ့…အားဟားဟာ့…မရပ်နဲ့ကွာ…မမ ပီးချင်လာပီ …အင့်ဟင့် ” ကျမရဲ့စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုယက်ပေးနေတုန်း မခံမရပ်နိုင်အောင် ကောင်းလွန်းလို့အော်ပစ်လိုက်မိတယ်။ ကျမ ခြေထောက်၂ချောင်းနဲ့ထွန်းထွန်းရဲ့ခေါင်းကို အတင်းညှပ်လိုက်မိပြီး သူ့လျှာနဲ့ ကျမ စောက်ပတ်ကို လိုးပေးအောင်လို့ အတင်းဖိချလိုက်မိပါတော့တယ် ။ သူ ကျမစောက်ပတ်လေးကိုအဲဒီလို ယက်ပေးနေတုန်းမှာပဲ ကျမ တစ်ခါ ပြီးသွားပါတော့တယ်ရှင် ။ ပြီးတာမှ အရမ်းကိုကောင်းတဲ့အထိ ပြီးတာပါ ။ ကျမ စောက်ပတ်နဲ့ ကော့ကော့ပီး ထွန်းထွန်းရဲ့မျက်နှာကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပွတ်ထည့် လိုက်မိတာပေါ့ ။ စိတ်ထဲမှာလည်း မီးတောင်တွေပေါက်ကွဲသွားသလားထင်လိုက်ရတာပေါ့ ရှင် ။ ကျမ ပီးတာဆုံးခန်းတိုင် သွားတဲ့အခါ ထွန်းထွန်းရဲ့စောက်ပတ်ယက်ပေးတာ တော်တော်ကောင်းကြောင်း ချီးမွမ်းလိုက်မိပါတယ် ။ “ ဒီလိုသာအယက်ခံလိုက်ရရင် မကောင်းဘူးပြောတဲ့မိန်းမကတော့ ရူးနေလို့ဖြစ်မှာ မောင်လေးရဲ့” သူ့ကိုမြှောက် ပြောမိတာလေ ။ သူကလည်း ကျမကို ပြန်ပြီးပြုံးကြည့်နေလေရဲ့ ။ ကျမ သူ့လီးကြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မာလာတာကို သတိထားမိလိုက်ပါတယ် ။ ကျမရဲ့စောက်ပတ်လေး ကောင်းသွားစေဖို့ လိုးပေးမယ့်လီးကြီးပါလား ဆိုပီး တွေးမိလိုက်တာနဲ့ ကျမစောက်ခေါင်းထဲက အရေတွေ ပြန်စိမ့်ကျလာပြန်ပါရော ။ “ လိုး ကြ စို့နော် ” ကျမ ဒဲ့ဒိုးပဲပြောချလိုက်ပါတယ် ။
ထွန်းထွန်းကတော့ လီးအစုပ်ခံရတာရောစောက်ပတ်ကိုယက်ပေး ရတာရော ကြိုက်တဲ့ပုံပဲ ။ ဒါပေမယ့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လိုးရမှာကိုတော့ အတွေ့အကြုံမရှိလို့ စိုးရွံ့နေတယ်လို့ထင်မိတယ် ။ ကျမက သူ့ကိုကြည့်ရင်း ကောင်းမှာပါကွယ်လို့ပြောလိုက်ရတာပေါ့ ။ ကျမ က ခပ်ကြမ်းကြမ်း အလိုးခံချင်တာလေ စိတ်တွေထနေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်လေး စစချင်း ကြမ်းကြမ်းလိုးခိုင်းလိုက်ရင် ကြောက်သွားမလား စိုးရိမ်နေရတာကိုး ။ အူရိုင်းလေးမို့လို့လေ ။ သူ့မျက်နှာ ပေါ်ကို ကြည့်လိုက်မိတော့ သူ ဘာကို ဘယ်လိုစပီးလုပ်ရမယ်ဆိုတာလုံး၀ မသိသေးတဲ့ပုံ ။ အဲဒါကြောင့် ပထမဆုံးတစ်ချီ မှာ ကျမ သူ့အပေါ်ကနေ တက်ပြီးလိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရှင် ။ “ မောင်လေးကိုဒီလိုပုံနဲ့မမလိုးပေးတာ ကြိုက်မှာပါကွယ် ” ကျမ သူ့ကိုပြုံးပြရင်း ပြောလိုက်တယ်။ သူ့ကို ပက်လက်လှဲခိုင်းထားပြီး ကျမကသူ့ဗိုက်ပေါ်ကို ပေါင်၂ချောင်းကားယားခွလိုက်ပြီး အရင်တက်ထိုင်လိုက်တယ် ။
သူ့ကို မမှိတ်မသုန်စိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့လေ ။ အဲဒီနောက် သူ့လီးကြီးကို ထိန်းကိုင်ရင်း ကျမ ရဲ့ရွစိထနေတဲ့ စောက်ပတ်အဝလေးမှာ တေ့လိုက်ပါတော့တယ် ။ ပြီးမှ တဖြေးဖြေးချင်း သူ့လီးမာမာကြီးပေါ်ကို ထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ။ သူ့လီးကြီး ကျမ စောက်ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ အတွေ့အထိကို ရလိုက်တော့မှ ပထမဆုံး တဖြေးဖြေးချင်း ထိုင်လိုက် ၊ ပြန်ထိုင်ချလိုက် လုပ်ပေးမိပါတယ် ။ နောက်တော့တဖြေးဖြေး အရှိန်မြှင့်တင်လိုက်မိတယ် ။ ကျမလည်း စောက်ခေါင်းထဲမှာ အရသာတွေ့လာတာနဲ့အမျှ မြန်မြန် ဆောင့်ဆောင့်ပေးမိပါတော့တယ်ရှင် ။ ကျမ သူ့ကို မ ယူလိုက်ပီး နမ်းလိုက်ပါသေးတယ် ။ သူကလည်း နမ်းတာကို မလွှတ်ပဲ ကျမရဲ့ခါးတွေကို လက်တွေနဲ့သိုင်းဖက်ထား သေးတယ်ရှင့် ။ “ အိုး…မမရယ်… မမ စောက်ပတ်လေးက အရမ်းကြပ်နေတာပဲနော် … လိုးရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲဗျာ ” ထွန်းထွန်းက ညည်းသံလေးနဲ့ပြောလာပါတယ် ။ ထွန်းထွန်းကတော့ ဒီလိုမျိုး ကျမကိုလိုးရမယ်လို့ဘယ်ထင်ထားပါ့မလဲနော် ။ ကျမကတော့ ကျမ စိတ်ကူးယဉ် ပီးရူးခဲ့ရတဲ့ လူပျို နုနုလေးကို လိုးနေရပီလေ ။..ပြီး
ငါ သိပ္ အထီးက်န္တယ္ သူငယ္ခ်င္း…. ဒါေၾကာင့္နင့္ကို ငါ ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္” လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုက္ေတာ့ ႏြယ္နီက ကၽြန္ေတာ့္ကို အေၾကာင္သား ၾကည့္ေနတယ္။“နင္က အထီးက်န္ရေအာင္ ရည္းစားၾကီး ငုတ္တုတ္နဲ႔ေလ။ ငါက အသည္းကြဲေနတာဟဲ့” “ငါ့ရည္းစားက ႏုိင္ငံျခားမွာေလ။ ၾကာျပီဟ။ ငါက ရည္းစားရွိတယ္လို႔ နာမည္ပဲရွိတာ။ ငါေျပာတာ နင္သေဘာေပါက္ပါတယ္ ႏြယ္နီရာ” ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ႏြယ္နီက ငယ္ငယ္ကတည္းက ေမာင္ႏွမလို ေနခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ငယ္ငယ္ကတည္းက ရည္းစားရွုပ္တယ္ဆိုေပမဲ့ ႏြယ္နီ႔ကိုေတာ့ ေမာင္ႏွမလိုသာ ဆက္ဆံတယ္။ ေယာကၤ်ားေလး သူငယ္ခ်င္းေတြလိုပဲ ခ်စ္တယ္။ ဟိုေကာင္ေတြနဲ႔ ေဘာလုံးသြားမကန္ျဖစ္တဲ့ ေန႔ဆို ႏြယ္နီ႔အိမ္သြား၊ သူေကၽြးတဲ့မုန္႔စား၊ ေခြၾကည့္ေနက်။ ႏြယ္နီက ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကိဳက္ေနတယ္လို႔ ေဘာ္ဒါေတြက ေနာက္က်ရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္က […]